XAFSA MAXAMED LUQMAAN: " - Saaxiibadey ayaa ka dambeysay shir-qoolka afduubkeyga" : Calanka.com
XAFSA MAXAMED LUQMAAN: ” – Saaxiibadey ayaa ka dambeysay shir-qoolka afduubkeyga”
Xafsa Maxamed Luqmaan, oo ah haweeney ganacsato ah oo 23 jir ah, oo la afduubay muddo shan maalmood ah ayaa shaaca ka qaaday in saaxiibteed ay ka mid ahayd afduubayaasha. Waxaysheegtay in Xafsa Cabdi, haweeneyda lasoo xidhay subaxnimadii maanta ee Kinangop iyo tuhmane kale, ay ahayd maskaxdii afduubka.
Dhowr afduub oo loo geystay gabdho ayaa la soo werinayay dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay.
“Waxay ahayd saaxiibtay, in kasta aysan ahayn qof aan aad isugu dhownahay, laakiin iyada ayaa igu hoggaamisay dabinka afduubka. Waxay iga codsatay inaan u raaco Kayole oo ay ku yaallaan dukaankeeda kale, “ayay tidhi.
Baadhayaasha dambiyada ayaa qabtay labada eedeysane oo ay ku tilmaameen kuwii ugu muhiimsanaa ee ka danbeeyey afduubka iyo jirdilka loo geystay Xafsa Maxamed Luqman.
Haweeneyda 23-jirka ah oo ka ganacsan jirtey Islii ayaa la waayey Juun 15, 2021, waxaana soo badbaadiyay booliska shan maalmood ka dib.
Jackson Njogu oo 24 jir ah iyo Xafsa Cabdi oo 21 jir ah ayaa saaka laga qabtay Crystal View Lodge oo ku taal nawaaxiga deegaanka Kinangop oo ay xalay ku hoydeen.
Baadhayaasha ayaa yiri “Subaxnimadani maanta ma ahayn maalin nasiibkoodu hagaagsanaa. Waxaa la soo qabtay qolka nambarka 8-aad ee kuyaala Crystal view lodge,”
Booliska ayaa sheegay in labadan qof ee is jecel ee soo abaabulay afduubka Hafsa Mohamed oo ka dhacay dukaankeeda, la sheegay inay ku guuleysteen inay lacag dhan 650,000 oo shilinka Kenya ah ay ka furteen akoonada bangiga dhibanahaas intii ay u afduubnayd.
“Markii ay dambiga galeen, iyaga (Jackson Njogu iyo Hafsa Cabdi) waxay u baxsadeen Kinangop waxayna ka iibsadeen baar, halkaasoo ay ka shawlgelayeen,” ayaa lagu yiri fariin ay soo dhigeen agaasinka baarista dambiyada.
Nimankan sirdoonka ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in labadan qof ee maanta la qabtay, xilli waagu baryay, kooxo qarsoodi ah oo ka socda Xafiiska Baadhista iyo Sirdoonka Dambiyada, ay qayb ka ahaayeen hawlgalka qabashadooda.
Xafsa Maxamed, oo ku nool California Estate ee xaafadda islii ee magaalada Nairobi, ayaa waxaa baarayaashu ka heleen qol ku yaal Matopeni, Kayole, halkaas oo lagu qasbay inay ku sii negaato haanta biyaha ee madhan.
Kahor intaan la waayin Luqmaan , duubista kaamirooyinka ilaalada ee dukaankeeda ayaa muujisay inay dukaanka soo gashay 4:44 pm Talaadadii, June 15 iyadoo ay la socoto Xafsa Cabdi.
Waxaana la arkayey iyada oo indhaha kala hadlaysa nin kale oo aan la aqoon kahor inta aysan ka bixin dhismihii dukaanka.
Xafsa Lukman ayaa sheegtay inay ku sugnayd goobteeda ganacsi ee caadiga ah Kaliforniya ee xaafada Islii markii ay Xafsa Cabdi u timid maalintaas kana codsatay in u raacdo goob ganacsi oo ay ku leedahay Kayole.“Waxay ii sheegtay inay dukaan ku leedahay Kayole, halkaas oo ay ku iibinaysay qaraha laakiin markii aan tagnay, ma jiraan wax aan ka ahayn dhul qashin badan oo ay i geysay,” ayay tiri.
Markii dambe waxaa soo badbaadiyey saraakiil boolis ah iyada oo xaalad wanaagsan ku sugan in kastoo la jirdilay. Mid ka mid ah faraheeda ayaa sidoo kale la jaray.
Labada afduubayaashu waxay dalbadeen madaxfurasho dhan 5 milyan oo shilin si ay u sii daayaan Hafsa Maxamed.
Si kastaba ha noqotee, intii aan madaxfurashada la bixin ayay tuhmanayaasha ogaadeen in booliisku ku daba jiro kolkaas ayay doorteen inay cararaan.
Labada eedeysane ayaa maxkamad la soo taagi doonaa Isniinta.
“Waan ku kalsoonaa iyada oo had iyo jeerna waan caawin jirey markay ii baahn tahay. Kaliya waxaan rabaa in cadaalada shaqayso oo laga jaro wixii ay i soo mariyeen. Aad ayaan ugu faraxsanahay in la xidhay” ayay tiri Xafso.